Symbian OS သုံး Nokia Touch Screen ဖုန်းတွေအတွက် မြန်မာကီးဘုတ်နဲ့မြန်မာဖောင့်ပါ – Myanmar Mobile App Edition: Myanmar | ပြည်တွင်းပြည်ပမုိုဘိုင်းသတင်းများ
4G,CDMA,GSM,WIFI Coverage maps for android Root Call Blocker Pro v1.8.3.30 (2.66MB) Beat the Boss2(17 ) v1.6 Apk Game (42.28 Mb) The Pirate Bay Browser Premium v5.4.3 Apk (2.52 Mb) iExplorer 3.2.1.4 For Mac Os X 16.5 MB Home
Published On: Thu, Aug 4th, 2011 Nokia & Sony Ericssion ဖုန်း application များ / မိုဘိုင်းဖုန်းဆိုင်ရာ Tutorials | By သက်နိုင်စိုး Symbian OS သုံး Nokia Touch Screen ဖုန်းတွေအတွက် မြန်မာကီးဘုတ်နဲ့မြန်မာဖောင့်ပါ
Nokia touch ဖုန်းများတွင် ထည့်သွင်း အသုံးပြုနိုင်သောမြန်မာကီးဘုတ်ရောပါတဲ့ SymbianMyanmar v3.0 ကိုတင်ပေးလိုက်ပါတယ် ။ ယင်းဆော့ဖ်ဝဲသည် မြန်မာစာ အသုံးများကို ဖုန်းစနစ်များ အတွင်းတွင် ပြောင်းလဲသွားအောင် လုပ်ဆောင်ပေးနိုင်ပြီး SMS ပို့ခြင်း အင်တာနက်ကြည့်ရှုခြင်း သီချင်း နားထောင်ခြင်းတို့နှင့် အခြား office application များတွင်ပါ မြန်မာစာကို အသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်သည်..။ ယင်းမြန်မာစာ စနစ်တွင် အသုံးပြုထားသော font အမျိုးအစားများမှာ ဇော်ဂျိ နှင့် မြစေတီ font များကို သုံးစွဲထားခြင်းဖြစ်ပြီး ယင်းဖောင့်များ ထည့်သွင်းထားသော ဖုန်းများသို့ SMS ပို့ရာတွင်လည်း တဖက်မှ SymbianMyanmar ဆော့ဖ်ဝဲ မရှိရင်တောင်မှ ယင်းစာများကို မြင်ရနိုင်မည်ဖြစ်သည်..။SymbianMyanmar v3.0 ကိုထည့်သွင်းလိုပါက series 60v5 ဖုန်းများဖြစ်သော Nokia 5800, N97, 5530, X6 အခြား Symmbian OS သုံး Nokia touchScreen ဖုန်းများတွင် ထည့်သွင်းနိုင်မည်ဖြစ်သည်..။
လုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့ features တွေအနေနဲ့
1. Contacts – မြန်မာစာသားများ ရေးသားနိုင်ခြင်း။
2. Message – မြန်မာစာသားဖြင့် ပေးပို့နိုင်ခြင်း။
3. Web Broswer – မြန်မာစာသားဖြင့် ရှာဖွေနိုင်ခြင်း။
4. Key Number – မြန်မာအက္ခရာအဖြစ် ပြောင်းလဲခြင်း။
5. Contact Bar – မြန်မာစာသားများ ရေးသားနိုင်ခြင်း။
6. Website – ဇော်ဂျီဖောင့်အား မြင်နိုင်ခြင်း။
7. File Name – ဇော်ဂျီဖောင့်အား အသုံးပြုနိုင်ခြင်းနှင့် အခြားသော အသုံးဝင်မှုများ။
(အထူးသတိပြုရမှာက – ဒီ application ကိုမသွင်းခင်မှာ ဖုန်းထဲမှာ မြန်မာစာပေါ်အောင်လုပ်ထားတဲ့ application တွေ ၊ font တွေကိုအရင်ဖြုတ်ထားဖို့ပါပဲ ။ error တက်နိုင်ပါတယ်)
အောက်မှာ application ကိုရယူနိုင်ပါတယ်။
SymbianMyanmar v3.0 အားရယူရန် (application ကိုသွင်းပြီးရင် ဖုန်းကို restart ချပါ)
SymbianMyanmar ကိုဖုန်းထဲမှာမသွင်းခင် အောက်မှာပြောထားတဲ့ နည်းနဲ့ အရင်လုပ်ပါ ။နို့မို့ဆိုရင် SymbianMyanmar ကိုသွင်းရာမှာ error တက်ပါလိမ့်မယ်။
Certificate Error မဖြစ်အောင်သွင်းနည်း About the Author
Galaxy S4 I9500 / I9505 တွေမှာ CWM လေးကိုဖျက်ပီး stock recovery အစားပြန်ထိုးမယ်
35 comments on “Symbian OS သုံး Nokia Touch Screen ဖုန်းတွေအတွက် မြန်မာကီးဘုတ်နဲ့မြန်မာဖောင့်ပါ”	nyiminn on November 2, 2012 at 6:28 am said:
I hv installed zawgyi in my nokia x6..but it doesnt good..
to install above application, i must remove that zawgyi..
so, pls tell me how can i remove it…i hvn’t found it in my application list… so i cunt uninstall it..help me..
Reply ↓	ko latt on November 7, 2012 at 7:08 am said:
i want to update my phone version.My phone is nokia 5800 xpressmusic.Can you help me,brother.Please,as fast as you can.Thanks.
please reply my gmail.Thank you very much.
Reply ↓	Zaw Paing on November 24, 2012 at 7:24 pm said:
ကျွန်တော့ဖုန်းက နိုကီယာ500 အမျိုးအစားပါ ကျေးဇူးပြုပြီးလင့်(ခ)ပို့ပေးပါဗျာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
Reply ↓	ဝင်းတိုး on March 27, 2013 at 5:06 pm said:
ကျွန်တော့ဖုန်းက နိုကီယာ x2-01အမျိုးအစားပါ ဖုန်းတွေအတွက် မြန်မာကီးဘုတ်နဲ့မြန်မာဖောင့်ပါ လိုချင်တယ်ပို့ပေးပါဗျာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
Reply ↓	Kyaw Naing Myint on November 24, 2012 at 8:45 pm said:
I` phone ka Huawei U8815 par. Root lote chin loe ku nyi pay par.
Reply ↓	soe moe on January 17, 2013 at 5:26 pm said:
nokia asia 309 အတွက် မြန်မာဖောင့်ရှိရင် ကူညီပါဦး။
Reply ↓	Htin Lin on January 17, 2013 at 7:29 pm said:
Nokia N9 အတွက်ရော မြန်မာစာဖောင့် ထွက်သေးဘူးလားဗျာ့ ဟီးးး
Reply ↓	သကြား on January 18, 2013 at 2:31 am said:
nokia x3 အတွက်မြန်မာဖောင့်ထည့်လို့ရမလားခင်ဗျာ…wifi တော့သုံးလို့ရပီး မြန်မာဖောင့်မရလို့ပါ
Reply ↓	Mung Pi on January 19, 2013 at 12:13 pm said:
nokia 610 အတွတ်မြန်မာဖောင့်လေး ကျေးဇူးပြုပြီးလုပ်ပေးပါအုံးခင်ဗျာ ……….
Reply ↓	min hein on February 27, 2013 at 3:46 pm said:
nokia5800တစ်လုံးရှိတယ် မြန်မာဖေါင့်မရလို့ဒီအတိုင်းထားတာစမ်းကြည့်လိုက်ဦးမယ် ကျေးဇူးပါ
Reply ↓	ညိမင်း on March 3, 2013 at 10:08 am said:
အကိုရေ တခုလောက်မေးချင် လို့ပါ U8825D ကို root မဖောက်ပဲ မြန်မာ စာသွငိးလို့ရမလား ခင်ိဗျ
Reply ↓	kaung htet on March 7, 2013 at 8:07 am said:
ရပါတယ် အင်တာနက်သုံးလို.တော.မရဘူးဗျ ဒါပေးမယ်. massage တော. ပို.လို.ရတယ်
Reply ↓	aungmawminn on May 9, 2013 at 3:25 pm said:
x6 မှာ chinese fonts ပါနေတာ install လုပ်လို့ မရဘူး လုပ်ပါအုံး
Reply ↓	ko htet on March 5, 2013 at 3:37 pm said:
imobile IQ2 ရဲ့ ROOT လုပ်နည်းနဲ့ မြန်မာစာ ထည့်နည်းလေးတင်ပေးပါလာခင်ဗျ၊
Reply ↓	thein htike on May 18, 2013 at 8:21 am said:
Reply ↓	ိမြင့်ဋ္ဌေး on March 5, 2013 at 3:58 pm said:
အကိုရေကျွန်တော်.ဖုန်းက nokia500ဗျ။မြန်မာဖေါင့်၇နိုင်မလား နော်။စမ်းကြည့်လိုက်ဦးမယ် ကျေးဇူးပါဗျာ။
Reply ↓	thetsoeaung on March 5, 2013 at 5:21 pm said:
အကိုရေ nokia မှာပဲ အဆင်ပြေမှာလားဗျာ
Reply ↓	အောင်သူ on March 8, 2013 at 5:40 pm said:
Blackberry အတွက်မြန်မာဖောင့် ရှိပါသလားခင်ဗျာ
Reply ↓	၀ါဝါ on March 12, 2013 at 2:54 pm said:
NOKIa touch screenတွင်မြန်မာစာဖောက်ဘယ်လိုထည့်၇ပါသလဲ
Reply ↓	min mya thaung on April 12, 2013 at 9:50 am said:
Reply ↓	soeminaung on March 18, 2013 at 12:24 pm said:
ကျွန်တော့ ဖုန်းက Nokia E5 အဲဒီအမျိုးစားဖုန်းထဲသို့ မြန်မာဖောက် ထည့်ချင်ပါ တယ် အဆင်ပြေမယ်ဆိုရင် လင့်လေးပို့ပေး ရှာကြည်တာ မတွေလို့
Reply ↓	Thurawannatun on March 18, 2013 at 5:13 pm said:
dr.web antivirus က လိုင်စင်ကီးတောင်းနေတယ် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ ။ ကူညီပါဦးခင်ဗျာ
Reply ↓	khunyanmyo on March 23, 2013 at 3:00 pm said:
အပေါ်ကဟာတွေအကုန်လုပ်ပီးပီဗျ..ဒါပေမဲ့ . ? ပုံပေါ်နေတယ်…
နှိပ်လိုက်ရင်.. unable to open , file type not supported ပဲပေါ်နေလို့.ဘာဆက်လုပ်ရမှာလဲ
Reply ↓	koaung on March 23, 2013 at 3:39 pm said:
ကျေးဇူးပါအစ်ကိုJavaphone တွေမှာရောမြန်မာ Font ထည့်လို့ရလား ရရင်တင်ပေးစေချင်ပါတယ်
Reply ↓	thuyanaing on March 27, 2013 at 7:33 pm said:
ako yay kyun taw phone ka nokia c6 o1 bya.phone ka firmware kya twar lout bel lo pyan tin ya ma le` so tar kuu nyi par oone.mobile shop mhar pe` lote lout ya tel so yin shop name lay pay par oone.address kaw naw.kyayyy zuuuu kabapar.
Reply ↓	နေဇင် on April 11, 2013 at 7:31 am said:
မရပါဘူး ကူညီကြပါအုံး Nokia xpressmusic 5800 ပါ ခက်ခဲနေပါတယ်…
Reply ↓	theinmin on April 18, 2013 at 3:29 pm said:
Reply ↓	tharpu on April 18, 2013 at 4:06 pm said:
Reply ↓	Lin on April 23, 2013 at 6:15 pm said:
i have installed but i still can’t read myanmar fonts. why? pls help me.
Reply ↓	ကိုနိုင် on April 28, 2013 at 9:05 am said:
အကိုရေ Nokia Lumia 920 အတွက် မြန်မာဖေါင့် လေး လုပ်ပေးပါအုံးဗျာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
Reply ↓	Tinaunglwin on May 2, 2013 at 2:22 pm said:
အကိုကျွန်တော်ဖုန်းကNokia603 ပါမြန်မာဖောင့်ကိုအရမ်းလိုချင်နေတယ်ဖြစ်နိုင်ရင်ကူညီပေးစေချင်တယ် ထည့်လို့ရနိုင်မရနိုင်လည်းသိချင်ပါတယ် ကျေးဇူတင်ပါတယ်
Reply ↓	koshwethit on May 9, 2013 at 5:40 pm said:
nokia 920 window 8 အတွက် မြန်မာဖောင့်ရအောင် ဆောင်ရွက်ပေးပါအုံး တင်ပေးပါအုံး
Reply ↓	ကိုကျော်ဝင်း on May 11, 2013 at 7:45 am said:
C2 NOKIA မှာမြန်မာဖောင့်ထည့်ချင်လို့ ပါ နည်းလမ်းလေးပေးပါဦး
Reply ↓	zaw min htike on May 18, 2013 at 6:35 am said:
NOKIA Lumia 920 windows phone အတွက် မြန်မာဖောင့်လေး တင်ပေးပါအုံး၊ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Reply ↓	shinelay on May 18, 2013 at 7:18 am said:
lynnoolwin on 4G,CDMA,GSM,WIFI Coverage maps for androidrockykoko on Y200 (U8655) root လုပ်နည်းlynnoolwin on 4G,CDMA,GSM,WIFI Coverage maps for androidwillian on Galaxy Ace2[i8160] Official v4.1.2 တင်ပြီး Root မယ်htunlinnkyaw on AVP: Evolution v1.3.2 APK+OBB(238Mb) Android Development